Onye bu nwunye Dwayne Johnson, Lauren Hashian? - Ozi
Isnye Bụ Nwunye Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Lauren Hashian?
Who Is Dwayne Rock Johnson S Wife
Dwayne The Rock Johnson gosipụtara na ezinụlọ ya nwalere nti maka coronavirus . Nke a gụnyere onwe ya na nwunye ya, Lauren Hashian, yana ụmụ ha abụọ: Jasmine (4) na Tiana (2). Ọ bụ ezie na ha nwere mgbaàmà dị nro, onye na-eme ihe nkiri 48 gbara afọ na-egosi na ha nọ n'ụzọ mgbake. Haleluya!
Ya mere, onye bụ nwunye Dwayne Johnson, Lauren Hashian? Nke a bụ ihe niile anyị maara gbasara mmekọrịta di na nwunye ahụ.
Ọnye na-bụ Lauren Hashian?
Ọ bụ onye ọbụ abụ na onye na-emepụta ihe, bụ onye sonyere n'egwú mgbe ọ dị obere, ebe ọ bụ na nna ya, Sib, bụ onye na-egwu egwu maka ìgwè Boston na 70s. Agbanyeghị Sib nwụrụ mgbe ọ dị afọ 67 mgbe ọ na-eme ụgbọ mmiri, Lauren eburula ihe egwu egwu ya.
Olee mgbe ha malitere ịlụ?
Dwayne na Lauren zutere na 2006 mgbe Johnson na-ese foto Atụmatụ Egwuregwu , ma ha amaliteghị ịlụ na-achị ruo mgbe 2007 mgbe omee ahụ mara ọkwa nkewa ya na nwunye mbụ ya, Dany Garcia.
Olee mgbe ha kwere onwe ha nkwa ọlụlụ?
Amaghi otutu ihe banyere aka ha, obu ezie na Johnson kwuru na mbu Ntụrụndụ n'abalị na ọ na-akpọ Hashian nwunye ya ọtụtụ afọ.
M na-ezo aka na ya dị ka nwunye m oge niile. N’ihi ya, ọtụtụ mmadụ dị ka, ‘Oh, ị lụrụ di?’ Ka o kwuru. Ọ dị m ka, 'Mba. Mfe. Emela ngwa ngwa nnukwu nna. ’
A post nke therock na-akọrọ (@therock) na Aug 19, 2019 na 3: 27 am PDT
Olee mgbe ha lụrụ?
N'August 2019, di na nwunye ahụ kekọtara eriri na ememe chiri anya na Hawaii. Hasanị yi Uwe agbamakwụkwọ Dara by Mira Zwillinger , nke gosipụtara azụ na-emeghe, eriri olu na akwa mkpuchi. (Uwe ahụ na-ere maka $ 12,540.)
Hà nwere ụmụaka?
Ha na ụmụ nwanyị abụọ bụ Jasmine na Tiana. Johnson nwekwara nwa ọzọ site na alụmdi na nwunye mbụ ya, Simone (19).
Njikọ: Dwayne Johnson's Net Worth Is Mind Bogglingly Large (Eleghị anya Ọ bụ n'ihi na ọ nọ na fim ọ bụla)
Ihe Ọmụma & Mmụta
32 Tequila Cocktail Recipes Sip All Oge Ezumike
Ndị 4 Grannies a na-ewere TikTok ma anyị abịarute ya
Ndụmọdụ 23 maka Otu esi eme ka mmadụ nwee obi ụtọ
Ebee ka ị ga-esi nweta nri ndị Singapore na Malaysian na NYC
Chọrọ Ihe Akaebe Na Uwe Uwe Na-efe Ubu Ka dịkwa Oge? Lelee 22dị 22 ndị a
Wzọ atọ ị ga - eme mgbe ị lụrụ di na Aquarius
E nwere 9 National Parks na California-Nke a bụ Ihe Pụrụ Iche Banyere Nke Ọ bụla
RuPaul's Net Worth Is Seriously Massive- & Ihe Niile metụtara ya na ‘Rupaul’s Drag Race’
Onyinye 21 Onye Nduzi Mma Ga-enwe Obi totọ Ighepu
Reese Witherspoon na-adị ka Nwa, Tennessee, na Nke a
Ha niile na-abịa na njedebe dị egwu na 'Nnukwu Littlegha ụgha' Season 2 Finale
Lelee Chris Pratt na-agba ọsọ maka ndụ ya na 'Jurassic World: Fallen Kingdom' Teaser Trailer
ndị enyi nwere elele 2
ọgwụgwọ ụlọ maka ntutu isi ọdịda njikwa na uto
ndepụta nke 2013 Hollywood romance fim
mmanụ oyibo maka ntutu isi
Top 10 edozi isi maka ụmụ nwanyị
top iri ihunanya Hollywood fim
n'elu Hollywood akụkọ ihe mere eme na fim
Enwebeghị Oge Ka Mma Ibu Ebube Jumpsuit
9 Atụmatụ ọgụgụ isi iji nweta gị site na ntutu isi nwa mbụ gị
9 Agbamakwụkwọ Agbamakwụkwọ Agbamakwụkwọ Ndị Na-eme Eziokwu N’eziokwu
30 Gluten-Free Dinners Can Pụrụ Ime na Nkeji 30 ma ọ bụ obere